कोविड– १९ बाट सुरक्षित रहनको लागि तपाईको सवारी साधनलाई कीटाणुरहित कसरी गर्ने ? « Sansar News
कोविड– १९ बाट सुरक्षित रहनको लागि तपाईको सवारी साधनलाई कीटाणुरहित कसरी गर्ने ?
६ असार २०७७, शनिबार १४:३०
कोविड १९ विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको अबस्थामा हामी सबैलाई राम्रो स्वच्छता अभ्यास गर्न धेरै आबश्यक छ। स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरू, पुलिस, वितरण सेवाका स्टाफहरु र यस्तै अन्य आवश्यक सेवाका कर्मचारीहरु बाहिर जाने आउने गरिराख्नु पर्ने भएकोले यस समयमा सवारी साधनले भाइरससहितका अन्य जीवाणुहरुलाई बोक्न वा सार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले तपाई आफ्नो कारमा बाहिर जानुभन्दा पहिले र फर्केर आउनुभएपछि आफ्नो सवारी साधनलाई राम्रोसंग सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ।
सवारी साधनका पाँच भागहरू जुन प्रयोगको अघि र पछाडि Disinfect गर्नुपर्छ जस्तै: भित्री र बाहिरी ढोका ह्यान्डलहरू, स्टीयरिंग (Steering), गियर (Gear), इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू (Electronic Devices) र सीट बेल्टहरु (Seat Belt)। मूलरूपमा सबै उच्च-टच पोइन्टहरूको (Touching Points) लाई धेरै ख्याल राख्नुपर्छ।
कहाँ कहाँ कसरी सफा गर्ने:
१) तपाईंको कार सफा गर्दा पन्जा र मास्क लगाउनुहोस् ।
२) म्याट वा कार्पेटलाई पानी र साबुनमा राम्रोसंग भिजाउनुहोस् ।
३) पानी र साबुनको थोरै मात्राको साथ ईन्टीरियर कपडा स्क्रब गर्नुहोस् ।
४) गाडीको बाहिरी भागलाई पनि साबुन र पानीले सफा गर्नुहोस् ।
५) धेरै नै छुनु पर्ने सतहहरु जस्तै: स्टीयरिंग (Steering), नब्स (Knobs), स्विचहरू (Switches), स्क्रीन (Screen), बटन (Buttons)। निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंले यी कार इन्टिरियर क्लीनर (Car Interier cleaner) प्रयोग गरेर सफा गर्नुभयो । यदि तपाईंसँग छैन भने, तपाईं अमोनियामा आधारित समाधान (१: १ अनुपातमा पानीको साथ गिलास र विन्डो क्लीनर पातलो गरेर) बनाउन सक्नुहुन्छ।
६) हेडलाइनर (Headliner), हेडरेस्ट र विन्डो ग्लास (Headrest and Window Glass), अलि कम सम्पर्क हुने भागहरू हुन्, तर यी पनि एकैपटकमा सफा गर्नु आवश्यक छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशहरू सफा गर्नका लागि, व्यक्तिहरुले बेवास्ता गर्छन्, जस्तै भित्री र बाहिरी ढोकाका ह्यान्डलहरू र कार कुञ्जी (Car Key) इत्यादी।
७) HVAC एकाई कीटाणुरहित गर्नुहोस् ।
HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) केबिन भित्र हावा सर्कुलेट हुदा यसले कीटाणुहरू बोक्न सक्छ । कोविड -१९ प्रकोपको समयमा, यो प्रणाली सफा गर्न आवश्यक छ, र यो सजिलै घरमा गर्न सकिन्छ । पहिले, एसीभेन्टहरू (AC Vents) सफा गर्नुहोस् (विशेष क्लीन र स्प्रे गरेर जस्तै 3M, वा कुनै पनि अमोनिया-आधारित सोलुसन)। दोस्रो, केबिन फिल्टर हटाउनु होस्र सफा गर्नुहोस् (यो प्राय: कारमा ग्लोभ डिब्बाको पछाडि अवस्थित हुन्छ)।
८) भ्याकुम-केबिन सफा गर्नुहोस्
यो केबिन राम्रोसँग सफा गर्न पोर्टेबल भ्याकुम क्लीनर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि तपाईंसँग छैन भने कार्पेट र फ्लोर मैटहरू धुनुहोस् र प्याडल, गियर-लिभर, ह्यान्डब्रेकली भरमा एक कीटाणुनाशक तरल प्रयोग गर्नुहोस्, र साथै सिटहरूमा कीटाणुनाशक तरलमा लेप गरिएको कपडाले सफा गर्नुहोस् । यदि तपाईंसँग कीटाणुनाशक तरल पदार्थ छैन भने साबुन पानीले पनि धुन सकिन्छ।
९) प्राय सधै छोई राख्ने आन्तरिक सतहहरुलाई अल्कोहलमा आधारित कीटाणुनाशकको साथ सफा गर्नुहोस्।
१०) तपाईंले प्रयोग गरिएका ग्लोभ्सलाई बिनमा राख्नुहोस्र कपडा, स्पन्जर लुगा धुनुहोस्।